Semalt को DSD मा हेर्नुहोस्, एसईओ ड्यासबोर्डहरूमा अर्को ठूलो कुरा
सेमेल्टको डीएसडीमा हेर्नुहोस्, एसईओ ड्यासबोर्डहरूमा अर्को ठूलो कुरा
के हुन्छ यदि एक सेवा छ कि तपाइँ तपाइँको एसईओ प्रदर्शन डैशबोर्ड बनाने को लागी तेस्रो पार्टी उपकरणहरु को आधार मा बिना मद्दत गर्न सक्छ? मञ्चमा तपाईंको ग्राहकले उनीहरूको अभियानको प्रदर्शन नियमित रूपमा जाँच गर्न सक्दछन्। कुनै बढि गुगल डाटा स्टुडियो वा तेस्रो-पार्टी उपकरणहरू जस्तै Ahrefs र SEMRush जुन हरेक कुनामा paywalls छ।
के हुन्छ यदि केहि उपयोग गर्न सजिलो सेवा छ कि केहि मिनेट को मामला मा यस्तो एसईओ ड्यासबोर्ड उत्पन्न?
Semalt सँग उत्तर छ: समर्पित SEO ड्यासबोर्ड उर्फ ​​DSD, एक सेवा जसले मार्केटर्सले प्रदर्शन प्रदर्शन गर्छ र जैविक खोज प्रदर्शनलाई भिजुअलाइज गर्ने तरीकामा क्रान्तिकारी हुन्छ। द्रुत र सजिलो चरणहरू र न्यूनतम शुल्कको साथ तपाइँको वेबसाइटमा एसईओ प्रदर्शन ड्यासबोर्ड होस्ट गर्न मद्दत गर्ने एक उपकरण। यो Semalt द्वारा नवीनतम प्रस्ताव छ।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड र यसले कसरी तपाईंलाई ग्राहकहरूलाई प्रभाव पार्न र बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ त्यसमा विस्तृत नियाल हेरौं।
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड के हो?
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड (DSD) एक हो मालिकाना एनालिटिक्स-आधारित एसईओ प्रदर्शन ट्रैकर Semalt, विश्वको अग्रणी मार्केटिंग समाधान कम्पनीहरु मध्ये एक द्वारा बनाईएको। यसले एजेन्सीहरू र फ्रीलांसरहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको एसईओ अभियानको प्रदर्शन कल्पना गर्नका लागि सेतो लेबल ड्यासबोर्डहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
DSD प्रदर्शन सामग्री मार्केटिंगको लागि एक सबैमा एक समाधान हो जहाँ यसले Semalt को नेटिभ एनालिटिक्स र टेक्निकल उपकरणहरूबाट डाटा खींच्छ र यसलाई सरल तरीकाले प्रदर्शन गर्दछ। यसले संख्यालाई कम पार्छ र चार्टहरू र अन्तर्दृष्टि सिर्जना गर्दछ जसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई उनीहरूको अभियानको प्रदर्शन मापन गर्न र आवश्यक परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ।
उदाहरण को लागी, जब तपाईं एक ग्राहक को लागी एक एसईओ रिपोर्ट उत्पन्न, तपाईं सामान्यतया गुगल एनालिटिक्स, गुगल खोज कन्सोल, Ahrefs, र RankWatch जस्तै उपकरण को एक किस्मबाट डाटा निकाल्नुहुन्छ र एक प्रस्तुति मा सँगै राख्नु। तपाईं दृश्य डेटा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै गुगल डाटा स्टुडियो वा माईक्रोसफ्ट पावर बीआई वा झांकी। अब, यसले धेरै मेहनत लिन सक्छ, स्रोतहरू, र पैसा उत्पन्न गर्न। सही?
अब एक प्रणालीको बारे सोच्नुहोस् जुन तपाईंलाई यी सब एकल प्लेटफर्ममा गर्न दिन्छ। त्यो DSD हो, प्रदर्शन मार्केटिंगको संसारमा अर्को ठूलो र उत्तम कुरा। यो एजेन्सीहरू र फ्रीलांसरहरू जस्तै बनाइएको हो ताकि तिनीहरू आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नेछन् र तिनीहरूबाट बढि व्यापार ल्याउन सक्नुहुनेछ।
यसका अवयवहरू के हुन्?
DSD मुख्यतया तीन घटकहरु मिलेर बनेको छ जसरी तल छलफल गरिएको छ। यसलाई सिर्जना गर्न मुश्किलले केहि मिनेटहरू लिनुहोस्, र तपाईं यसलाई आफ्नै डोमेनमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यहाँ अनलाइन कारखाना को लागी बनाईएको DSD जाँच गर्नुहोस्। एक मुख्य लेआउट आवश्यक उपकरणहरू र मूल्यांकन संवादको साथ गृहपृष्ठमा। कति सजिलो र सुविधाजनक!
चित्र १ - समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड अनलाइन फैक्टरीको लागि सिर्जना गरियो
निम्नलिखित DSD को मुख्य तीन घटकहरू छन्:
गुगल SERP विश्लेषण - खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरू (SERPs), ट्राफिक, शीर्ष प्रदर्शन गर्ने कुञ्जी शब्द र सामग्री, केही खास खोजशब्दको लागि शीर्ष १०० स्थानहरू, र अधिक अन्तर्दृष्टिहरूको बारेमा सबै कुरा।
टेक्निकल एसईओ अडिट - तपाईले अडिटिंगका लागि तेस्रो-पार्टी उपकरणहरूमा निर्भर हुनु पर्दैन। DSD ले एक व्यापक वेबसाइट विश्लेषण गर्दछ र सुधारको क्षेत्रहरू देखाउँदछ। वेबपृष्ठ लोड गति, साइट क्रल रिपोर्ट, सामग्री मौलिकता, होस्टिंग मुद्दाहरू, क्रलिंग मुद्दाहरू, र अधिक बढि जाँच गर्नुहोस्।
SEO प्रदर्शन रिपोर्ट - तपाइँको सबै SEO गतिविधि को प्रभाव प्रदर्शन गर्न को लागी नयाँ तरीका। तपाइँको ग्राहकहरु देखाउनुहोस् ती जैविक खोज ल्याण्डस्केपमा छन्, तपाइँको ब्रान्डिंगको साथ संलग्न छ।
यी तीन कम्पोनेन्टहरू भित्र उपलब्ध केही उल्लेखनीय उपकरणहरू हुन्:
पृष्ठ गति विश्लेषक
PDF र CSV रिपोर्ट जेनरेटर
त्यहाँ धेरै अधिक उपकरणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो ग्राहकको एसईओ यात्राको प्रत्येक चरणमा प्रदर्शन मापन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भर्खर एक नयाँ ग्राहक जहाजमा? वेबसाइट प्राविधिक अडिटबाट सुरू गरेर किन सुधारको क्षेत्रहरू खोज्नुभएन? Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डले वेबसाइटको साथ सही र गलतको चीजहरूको पक्षीको आँखा दृश्य दिनेछ, यसको समग्र सामर्थ्य सुधार गर्ने तरिकाहरूका साथ।
वा चोरी साहित्य जाँचकर्ताको केस लिनुहोस्, जुन आजका दिनहरू मध्ये एक पछि खोजिने उपकरणहरू मध्ये एक हो। तपाइँ सामग्रीको प्रत्येक टुक्रा हुन चाहनुहुन्छ जुन तपाइँको ग्राहकको साइटमा जान्छ १००% अद्वितीय र वास्तविक। डीएसडीले तपाईंलाई यो पुष्टि गर्न मद्दत गर्दछ कि यो यस्तो छ कि तपाईं प्रतिलिपि अधिकारको लागि खिच्नुहुन्न वा DMCA टेकडाउन अनुरोधहरू प्राप्त गर्नुहुन्न। DSD ले तपाइँलाई त्यस तरिकाले रक्षा गर्दछ।
यहाँ ध्यान देने योग्य मुख्य कुरा यो हो कि यी सबै कम्पोनेन्टहरू नि: शुल्क उत्पन्न हुन्छन् जब तपाईं Semalt को DSD को लागि छनौट गर्नुहुन्छ। केवल हाम्रो तीन योजनाहरू मध्ये एकमा साईन अप गर्नुहोस् (नि: शुल्क, र प्रो) र DSD का फाइदा उठाउन सुरु गर्नुहोस्।
DSD को लागी बिभिन्न योजनाहरु मा एक छोटो नोट
DSD तीन योजनाहरुमा उपलब्ध छ:
नि: शुल्क - सामान्य तथ्या .्क, दैनिक मेट्रिक्स गतिविधि, र १० ग्राहक अनुरोधहरू
LITE - नेतृत्व उत्पादन र अनुकूलन JS कोड क्षमता
प्रो - दुबै निःशुल्क र LITE प्रोग्रामबाट विकल्पहरू + लिडगेन डाटाबेसमा पहुँच
DSD ले कसरी काम गर्छ?
यो सबै सुविधा पछाडि त्यहाँ धेरै काम हुन्छ जुन हुन्छ। Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड व्यक्तिगत ड्यासबोर्डहरू सिर्जना गर्न धेरै स्वामित्व उपकरण र डिजाइन प्रणाली प्रयोग गर्दछ। यहाँ प्रक्रिया पछि आउँदछ जुन नयाँ ड्यासबोर्ड सिर्जना गरिन्छ:
एउटा सबडोमेन ड्यासबोर्ड होस्ट गर्नको लागि सिर्जना गरिएको छ (उदाहरण: https://seo.marcelino.si/ )
यो तपाइँको आवश्यकता र ब्रान्डिंग अनुसार अनुकूलित छ
DS • उहाँ DSD प्रशासन प्यानल सक्रिय छ, जुन तपाईं विभिन्न ग्राहकहरूको लागि अनुकूलित रिपोर्टहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो जहाँ तपाईं डाटा पोइन्टहरू र ट्र्याक प्रदर्शन जोड्नुहोस्
लीड जेनरेशन, कस्टम ट्र्याकिंग, र लक्ष्य पीछा यहाँ हुन्छ
तपाईं ग्राहकको साथ ड्यासबोर्ड साझा र प्रदर्शन सुधार छलफल
छवि २ - DSD सब्ब्राउड र अनुकूलित रूप
यस प्रक्रियालाई एक पटक मात्र पछ्याउनुपर्दछ, त्यसपछि तपाईंसँग ड्यासबोर्डमा पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। DSD प्रशासन प्यानल महत्वपूर्ण घटक हो, जुन तपाईं क्लाइन्ट डाटा थप्न प्रयोग गर्नुहुनेछ र ट्र्याक गर्न मेट्रिक्स सेट गर्नुहोस्।
DSD का शीर्ष सुविधाहरू
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्डमा धेरै सुविधाहरू छन् जसले आफ्ना प्रतिस्पर्धाहरूलाई धेरै पछाडि छोड्छ। यहाँ केहि शीर्ष सुविधाहरूको सूची छ
सेट अप गर्न सजिलो; १ 15 मिनेट भन्दा कममा
कुनै लुकेको शुल्क छैन
एसईओ अभियान प्रदर्शनको स्मार्ट शोकेसद्वारा उत्कृष्ट तरिका डबल राजस्व
कोडिंग वा उन्नत प्राविधिक ज्ञान कसरी आवश्यक छैन
सहज, स्वचालित रिपोर्ट जेनेरेसन
आकार - - Semal's डीएसडी र उपकरण मनपर्दो UBersUGGEST, आहरेफ्स, सेमृश
तपाईंको व्यवसायको लागि DSD प्रयोग गर्ने फाईदा
तपाईंको मार्केटिंग व्यवसायको लागि DSD प्रयोग गर्नु तपाईंको सफलताको लागि सर्वोपरि हुन सक्छ। किनकि यसले रिपोर्ट रिपोर्ट उत्पादन उपकरणको रूपमा कार्य मात्र गर्दैन तर यसले तपाईंलाई कसरी देखाउँदछ कि तपाईंको कार्यहरूले कसरी ग्राहकको एसईओ अभियानमा प्रभाव पार्छ। हामी विशिष्ट डाटा पोइन्टहरू र मेट्रिक्सको बारेमा कुरा गर्दैछौं जस्तो कि अभियानको दौड अवधिमा शीर्ष प्रदर्शन सामग्री र सत्र अवधि।
यहाँ Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रयोग गरेर फाईदा को एक छिटो सूची छ।
तपाईंको अवस्थितलाई प्रभाव पार्नुहोस् र बिक्री/राजस्व बढाउनुहोस्
तपाईंको विगतका ग्राहकहरूको अत्याधुनिक ड्यासबोर्डहरू प्रदर्शन गरेर सम्भावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्
सबै मेट्रिक्स ट्र्याक गर्नको लागि एक स्टप समाधान
तपाईं रणनीति र कार्यान्वयनमा फोकस गर्न सक्नुहुनेछ र प्रदर्शन मापनलाई DSD मा छोड्नुहोस्
ग्राहकहरु लाई DSD बाट सिधा सेवा अनुरोध पठाउन दिनुहोस्
Semalt पुनर्विक्रेता कार्यक्रम पूरक
Semalt को DSD के होईन
यो पनि विचार गरेर हामी हाम्रो प्रमुख उत्पादनहरू बेच्छौं, AutoSEO र
पूर्ण एसईओ, त्यहाँ भ्रम को एक संभावना छ। स्पष्ट हुनको लागि, DSD एक स्ट्यान्डअलोन प्रणाली हो जुन हाम्रो अन्य उत्पादनहरूको हिस्सा होईन। यो एक उन्नत विश्लेषण आधारित दृश्य र रिपोर्ट उत्पादन को प्लेटफर्म हो कि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु लाई आफ्नो प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं DSD तपाईंको अन्य उपकरणहरूको पूरकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर एकल इकाईको रूपमा, यसले केवल ड्यासबोर्डको रूपमा कार्य गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो Semalt द्वारा प्रदान गरिएको नि: शुल्क सेवा हो।
यो समयको बारेमा हो कि तपाइँ तेस्रो-पार्टी उपकरणहरूमा निर्भर रहन रोक्नुहुन्छ र नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्नुहोस् जुन चलाख, अधिक अनुकूलनयोग्य, अधिक किफायती, र प्रयोगकर्ता-सहज हो। Semalt द्वारा आज समर्पित SEO ड्यासबोर्ड जाँच गर्नुहोस्। अनुरोध नि: शुल्क परीक्षण अब।